संक्रमण फैलाउन ‘एकै व्यक्ति पनि काफी’ भएकालेे महामारीका बेला ‘सोह्रश्राद्ध’ पनि भर्चुअल ! – Namaste Dainik
August 28, 2020 NamastedainikLeaveaComment on संक्रमण फैलाउन ‘एकै व्यक्ति पनि काफी’ भएकालेे महामारीका बेला ‘सोह्रश्राद्ध’ पनि भर्चुअल !
ललितपुर – पण्डित माधवप्रसाद शर्मालाई संक्रमणबीच ‘संस्कार जोगाउने’ पिरलोले सताउन थाल्दै छ । नजिकिदो ‘सोह्रश्राद्ध’ले त झन् नपिरोल्ने कुरै भएन । सोह्र श्राद्ध आगामी १७ भदौदेखि सुरु हुँदै छ ।
विज्ञका अनुसार संक्रमण फैलाउन ‘एकै व्यक्ति पनि काफी’ हुन्छन् । सोह्र श्राद्ध प्रतिपदादेखि औँसीसम्म एकै ब्राह्मणले धेरै घरमा गई श्राद्ध गराइदिन्छन् । नेपाल पञ्चांग निर्णायक समिति अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद् प्राडा. रामचन्द्र गौतम संक्रमणकालीन अवस्थामा ‘सकेसम्म एक जना ब्राह्मण मात्र बोलाएर श्राद्ध गर्न आग्रह गर्छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा नवीन लुइँटेलले लेखेका छन् ।
नेपालमा आज एकै दिन ५७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि।